Efa Mpialokaloka Tao Syria, Mbola Lasa Mpialokaloka Indray Ity Palestiniana Vehivavy Ity · Global Voices teny Malagasy
Efa Mpialokaloka Tao Syria, Mbola Lasa Mpialokaloka Indray Ity Palestiniana Vehivavy Ity
Voadika ny 23 Janoary 2016 15:18 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Français, Ελληνικά, čeština , Español, عربي, English
Efa mpialokaloka tao Syria i Nadera Aboud sy ny fianakaviany. Ankehitriny mbola lasa mpialokaloka indray — any Eoropa. Loharanon-tsary: Rebecca Collard. Nahazoana alalana avy amin'i PRI
Ity lahatsoratr'i Rebecca Collard ho an'ny The World nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 4 Janoary 2016, dia navoaka eto indray ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Raha nandao ny tranony tao Nazareth i Nadera Aboud, dia entana kely izay tena ilaina ihany no nentiny.
“Nanana devoara tsy maintsy natao aho ka dia nentiko ny bokiko,” hoy izy. Tamin'ny 1948 izany ary niady tamin'ny mpifanolobodirindrina taminy ny fanjakan'Isiraely vao nitsangana. Sivy taona izy tamin'izany fotoana izany. Niampita sisintany ny fianakaviana ary nankao Syria ary niandry tao.
“Natoky izahay fa hiverina [hody],” hoy i Aboud. “Nilaza tamiko ny reniko fa tsy ho ela dia hiverina hianatra any an-tsekoly.”
Natoky tokoa izy ireo, tsy nampiditra azy tao an-tsekoly tao Syria ny ray aman-drenin'i Aboud. Hody tsy ho ela izy ary hiverina hianatra. Saingy nandalo ny taona. Nahazo fialofana tao amin'ny tobin'ny mpialokaloka tao Yarmouk, manodidina an'i Damaskosy ny fianakaviany. Nampirina ny bokin-tsekoliny tao anaty baoritra i Aboud. Nanangan-trano ry zareo fa mbola notazonin'ny fianakaviana ihany ny lakilen'ny trano ao Nazareth.
“Lehibe izany trano izany,” hoy i Aboud, nahatsiaro ny tranom-pianakaviana tany Nazareth, “vita amin'ny vato, misy rihana roa.”
Nandritra izany fotoana izany dia nanambady razazavavy nandritra ny taompolo 1960, nihalehibe tao amin'ny toerana be fampiatranoana ireo Palestiniana an'arivony tao Yarmouk izy. Avy eo tonga tao amin'ny manodidina misy azy ny ady an-trano tao Syria. Nisy balafomanga nahavoa ny tranony tamin'ny Desambra 2012. Voan'ny piti-bala teo amin'ny lohany ny vadin'i Aboud, ary nentin-dramatoa tao amin'ny hopitaly ao Damaskosy ny vadiny. Saingy rehefa nikasa ny hody tao Yarmouk ry zareo dia nikatona ny lalana.
“Tsy nanana na inona na inona izahay,” hoy i Aboud. “Tsy nisy vola, tsy nisy na inona na inona.”
Nitodi-doha nankany amin'ny tanàna Syriana tao El Hami ry zareo. “Saingy na aiza na aiza nalehanay, dia nanaraka anay ny daroka baomba,” hoy izy. Nankany Istanbul ry zareo nony farany, ary tao no nahafatesan'ny vadiny tao amin'ny hopitaly. Niandry tao Torkia ny fianakaviana, saingy tsy misy ho avy ho an-dry zareo tao.
Tamin'ny Septambra, nanapa-kevitra ry zareo hanatevin-daharana ireo mpifindramonina an'aliny nitodi-doha ho any Eoropa Andrefana. “Tsy nanana taratasy ofisialy izahay, tsy nana-ponenana, tsy nanana hoavy, tsy nanana na inona na inona,” hoy i Mona zanakavavin'i Aboud. “Raha mankany amin'ny firenena Eoropeana iray izahay dia hahazo taratasy ofisialy, ary mety hahazo zom-pirenena aza.”
Raha nihaona tamin'i Nadera Aboud sy ny fianakaviany tao amin'ny sisintany manasaraka an'i Serbia amin'i Hongria aho, dia tao anatin'ny busy iray feno olona hankany amin'ny toby iray ry zareo, manatevin-daharana ireo mpialokaloka sy mpifindramonina efa ho iray tapitrisa nankany Eoropa tamin'ity taona ity. Efa niampita ny Ranomasina Aezeanina avy any Torkia tany Gresy ry zareo ary nandeha an-tongotra, seza misy kodiarana, ary nandeha taxi nanavatsava an'i Balkana.
Nadera Aboud, miaraka amin'ny zananivavy Mona (l). Loharanon-tsary: Rebecca Collard. Nahazoana alalana avy amin'ny PRI
Nitazona ny antotan-taratasim-pivezivezena navoakan'ny governemanta Syriana izy — ny zavatra azony manakaiky indrindra ny pasipaoro na zom-pirenena.
“Tsy manan-trano izahay, tsy manana firenena, koa aiza no tokony handehananay? Na aiza na aiza alehanay dia manaraka anay ny ady,” hoy i Aboud. “Nahare zavatra tsara maro momba an'i Alemaina izahay.”
Herinandro taty aoriana dia nahazo hafatra am-peo aho. Tonga tao Alemaina izy. Nilaza indray izay fao ao amin'ny toby iray, fa nilaza tamiko ny tokony hahatongavany hitsidika anay. Ary rehefa niantso indray an'i Aboud aho taoriana kelin'izany, dia nilaza tamiko izy fa mifampizara efitrano iray ao akaikin'i Warstein, Alemaina. Ary manantena ry zareo fa hifindra tsy ho ela amin'ny trano midadasika kokoa. Nilaza i Aboud fa faly izy, saingy mbola mahatsiaro matetika an'i Nazareth sy ny tranon-dry zareo misy rihana roa vita amin'ny vato.
Salama ry zareo ary lavitry ny ady, saingy ho an'i Aboud sy ny fianakaviany, dia midika mihoatra lavitra noho ny filaminana azo antoka i Alemaina. Efa ho 70 taona izao izy no mpialokaloka ary teraka mpialokaloka ireo zanany. I Alemaina no vintana voalohany ho azy ireo ho hafa noho ny mpialokaloka — ho lasa olom-pirenena feno amin'ny fanjakana iray.